Stöd till start av näringsverksamhet waxaa loogu tala galay adigaaga doonaya in aad shirkad sameysatid, adigoo kaligaa ah ama adiga iyo dad kale oo wada jira. Fursadaha aad taageero ku heli kartid waa in fikraddaada ganacsi ay faa’iido badantahay, ayna ku masruufi karto waqtiga fog.
Waxaad u baahantahay in aad shaqadoon ahaan nooga ag qorantihid. Waxaad u baahantahay sidoo kale in aad buuxisid waxyaabaha soo socda:
Waa in aad tahay shaqo la’aan ama aad khatar ugu jirtid in aad shaqo la’aan noqotid. Laakinse shuruudaha waa laga dhaafay taageerada aagagga ku yaalla degmooyinka aan sidaas loo degganeyn.
Waxaan marka hore qiimeyn ku sameyneynaa fikraddaada ganacsi iyo fursadaha aad u haysatid in aad shirkad waddid. Waxaan ka duuleynaa khibradahaaga iyo duruufaha kale si aad u waddid shirkad. Waxaan sidoo kale tixgelin siineynaa sida suuqa shaqada iyo tartanku u muuqdaan xagga faracaaga..
Adigaaga raba in aad shirkad sameysatid waxaad mararka qaarkood sameyn kartaa tababar shaqo si aad kor ugu qaaddid khibradahaaga ku aaddan faraca ay shirkaddaadu ka shaqeyn doonto. Haddii aadan shirkad horay uga shaqeysiin waxaan mararka qaarkood kugu casuumi karnaa kulamo warbixineed, tala bixin iyo koorsooyin loogu tala galay shirkadlayaasha cusub.
Waxaad xaq u leedahay aktivitetsstöd, utvecklingsersättning ama etableringsersättning. Waxaad lacagta qaadan kartaa ugu badnaan lix bilood.
Taageerada wax qabashada kulama jirtid ceymis. Macnaha waa in adigu aad eegtaa badbaadada ceymiskaaga.